Tababarka 1e Degmadda Isboortiga - GO! DUGSIYADA SPECTRUM (FULL-TIME // A-STREAM // CAMPUS RUGGEVELD)
1e sports fasalka
Noqo cayaar caan ah
spectrum School > koorsooyinka our > 1e Degree Sport > 1e Degree Sport
De 1e degree Sport (A-stream) waa u diyaargarowga tababarka LO & Sports, cayaartoyda Spectrum. Waxaad heleysaa waxbarasho guud oo isku mid ah qof walba, laakiin fiiro dheeraad ah ayaa sidoo kale loo bixiyaa Sport ee barnaamijkan.
In Sanadka 1e raacaan saacado dheeraad ah oo cayaar ah marka laga reebo waxbarashada aasaasiga ah. In Sanadka 2e Waxaad heleysaa waxbarasho ballaaran oo guud ahaaneed waxaad kaloo baraneysaa laamaha kala duwan ee isboortiga. Waxaa laguugu diyaarin doonaa koorsooyin isboorti oo badan.
Waa inaad haysataa xaalad jireed oo wanaagsan oo loogu talagalay dabeecadaha kala duwan oo aad ku dhiirrigeliso inaad sameyso dadaal dheeri ah oo loogu talagalay leylisyada halka aad ku leedahay tayo ama daneyn yar.
Ma ku guulaysatay sanadka 2e? Markaa waxaad ku bilaabi kartaa mabda'a jihada kasta ee heerka labaad. Waxaad sii wadi kartaa waxbarashadda nawaaxiga Sport-ka LO & Sports, aadna qayb ka tahay noo Ciyaaraha Spectrum!
KA HELI KARTAA SPECTRUM ATHLETES!
Kala tasho jadwalka casharka 1e fasal A stream Sport: